शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ खुशीको खबर : नौ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन हुँदै – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार ०८:५२ Basanta Khanal	0 Comments	IPO
काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसायमा विदेशिएका नेपालीले विदेशबाट नै नेपालमा प्राथमिक शेयर भर्दै आएका छन् । विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीलाई लक्षित गरेर गैर आवासीय संघ(एनआरएनए)ले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघले निष्कासन गर्ने प्राथमिक शेयरमा गैर आवासीय नेपालीले मात्रै आवेदन दिन पाउनेगैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए । मुलुक भित्र रहेका नेपालीले भने त्यस किसिमको प्राथमिक शेयरमा आवेदन दिन पाउने छैनन् ।संघले दुई वर्ष अघि लगानी सम्मेलन मार्फत १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुरूप लगानी भित्र्याउन भन्दै प्राथमिक शेयर निष्कासनको तयारी गरेको हो । यसमा आफ्नो १० प्रतिशत र नेपाल सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी रहने गरी एनआरएनले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच कम्पनी खोल्ने विषयको टुङ्गो लागि सकेको छ । यसका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको संस्थापक लगानीको लागि प्रतिबद्धता आइसकेको संघले जनाएको छ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत लगानी (पब्लिक) गैर आवासीय नेपालीको हुने छ । ८५ प्रतिशत हुन आउने आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्न कम्पनीले विदेशमा प्राथमिक शेयर जारी गर्ने छ । प्रति कित्ता १० डलरका दरमा कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने छ ।
नेपाल सरकार,नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको विद्यमान कानुनले बाधा नपु¥याउने गरी यसलाई विशेष सुबिधा दिइएको छ । सोही विशेष सुविधा प्रयोग गर्दै कम्पनीले दर्ता भए लगत्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राथमिक शेयर मार्फत रकम संकलन गर्ने पन्तले बताए । संघले विदेशमा रहेका १० लाख लगानीकर्ताको डिम्याट खाता खोल्ने अभियान चलाउँदै छ । लगानी गर्नका लागि ७० भन्दा बढी प्रोजेक्टको प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
← आजदेखि जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न मिल्ने ! फोन गर्दा पनि पैसा लाग्दैन !
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज मिति २०७७ चैत ४ गते बुधवारको राशिफल पढौं →